काङेसको चुकेको नेत्रित्व- | नेपाल डायरी डट कम
काङेसको चुकेको नेत्रित्व-	19
ट्यागहरुटिप्प्णी, देश काङेस, नेपाल, नेपाल बन्द, नेपाली काङ्रेस, बन्द, ब्लग, राजनिती, राजनीति	नेपाली राजनीतिको सबभन्दा पुरानो र धेरै समय सत्तामा रहेको र बलियो जनाधर पनि रहेको भनिएको पार्टी नेपाली काङ्रेसले नेपाल बन्द गरेरै छोड्यो । देश भित्र र बाहिरबाट अत्यन्त तिब्र बिरोध हुँदा हुँदै पनि काङ्रेस टसको मस भएन बन्द आयोजना गर्न । संभबत नेपालमा बन्द को बिरोध उठेको यो सबन्दा ठुलो स्वोर हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि किन हो काङ्रेसले आफुलाई पनि बन्द आयोजकको लहरमा उभ्यायो र अराजकता र तोडफोडमा उत्रियो ।
धेरै बर्ष राजनिती गरेका , देसका लागि आफ्नो सम्पूर्ण उमेर त्याग गरेका धेरै नेताको जमातहो काङेस । एमाले वा माओवादी जस्तो कुनै बिषयमा कम बिदादास्पद निर्णय गर्छ वा बिबादस्पद बिसयमा मौन रहन्छ भन्छन कागेसलाई । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुप मा पनि अली कती सहि अडान र निर्णय क्षमता भएको पार्टी मानिन्थ्यो काङेस केही हदसम्म । दुर्भाग्य त्यही काङ्रेस ले देश ठप्प पार्यो । तोड्फोड गर्यो र अराजकतामा उत्र्यो , जस्को निहु भने सार्है सामान्य र निम्नस्तर को थियो । सरकार लाई दबाब दिने संसद, कानुन र न्यायलय हुँदाहुँदै आफुलाई कानुनी सासन को हिमायाती मान्ने काङेसले उग्रपन्थी र बामपन्थी व्यबहार देखायो भन्दा अत्योक्ती नहोला । यसपाला काङेस चुक्यो र देश बन्धक बन्यो । नेत्रित्व चुक्यो रे पुरा देसले एक पटक फेरी दु:ख पायो । जब नेत्रित्व चुक्छ , पार्टी र देशले त्यस्को मुल्य चुकाउनु पर्छ , नेपाली काङेस को बर्तमान नेत्रित्व आज नराम्रानी चुकेको छ । दबाद र तनाब आएर गएर्को निर्णय ले देस लाई कहियै भलो गर्दैन । नेपाली राजनीति को पुरानो रोगले क्रमस काङेस लाई पनि गाज्न लागेको हो ? जुनासुकै पार्टी मा पनि सही र गलत मान्छे हुन्छन , झुन्ड हुन्छ , तर नेत्रित्वले सहि र गलत छुट्याउनु पर्छ । गलत झुन्डले जहिल पनि नेत्रित्वलाई गलत निर्णय गर्न दबाब दिएकै हुन्छ
तर जब पार्टी भित्रका फटाहा , गुण्डा , गलत झुन्ड र खराब मनसाय भएका ब्याक्तीहरु हाबी हुन्छ्न र नेत्रित्व ले त्यसको दबाब झेल्न सक्दैन , पार्टी त कमजोर हुन्छ नै , अन्ततोगत्वा त्यसले कसैलाई भलो गर्दैन । आजको काङेर्स को बन्द त्यसकै को उपज हो । र यसले कालन्तर सम्म नेपाली राजातिनी लाई पिरोल्ने छ ।
अझ दु:ख लाग्दो कुरा त के भने शहिद शब्दको यत्रो ठुलो अपमान गर्न किन उद्धत छ काङेस । मुद्दा फिर्ता भइसक्यो पौडेलको शहिद पनी घोषणा होलान । देसका लागि रगत बगाउने अरु प्रसस्त काङेसीहरु को दरदनाक मृत्यु भएको छ तर तिनिहरु कहिल्यै शहिद भएनन र पनि तिनिहरुको मुल्याकन नेपाली राजनीतिमा धेरै उचो छ । आज आएर किन गलत नजिर बसाउन खोज्दैछ काङेस ?
यहाँनिर बाल्क्रिश्न ढुङेलको आममाफी लाई लिएर नेपाली काङेसले उठाएको आवाज बिर्सनलायक बनेको छ , काङेसकै कारण । जब एउटा कानुनी रुपमा दोशी करार ब्यक्तीको बिषयलाई लिएर यो देसै ठप्प पार्ने हद सम्मा काङ्रेस ओर्लन्छ भने । नेपाली राजनीति हो , भोली देखिनेनै छ – शिव पौडेलको मुद्दा फिर्ता को बिसयलाई लिएर माओवादीले अड्को थाप्ने छ , तिम्रो शिव निर्दोस अनी मेरो बालक्रिस्न चै दोशी ? एमालेले अर्को बबण्डर मच्चाउने छ , तिम्रो शिव निर्दोस , मेरो पर्शुराम चै दोशी ? यस्ले नेपाली राजनिती लाई अपराधिकरणको खाडलमा फस्ने निस्चित छ , यस्को श्रेय काङेस लाई जादैन र ? नेपाली राजनतिलाई अपराधीकरण बाट न माओवादीले रोक्न सक्यो , न एमालेले । काङेस समेत अब आएर यही घन्चक्करमा फसे पछी देश को दुर्गती हुनबाट रोक्ने चै कस्ले ?